Habka la tacaalida cudurka Aids ee Iswiidhan oo la dhaliilay. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Habka la tacaalida cudurka Aids ee Iswiidhan oo la dhaliilay.
La daabacay tisdag 24 juli 2012 kl 10.17
Hay’ada Q.M u qaabilsan la tacaalida cudurka Aids ayaa dhaliil u soo jeedisay hanaanka ay Iswiidhan ku xukumaeyso fidista cudurka HIV/AIDS ee ah in haddii qofka qaba cudurka uu la galmooda qofka kale isaga oo aan u sheegan in u hayo cudurka in qofkaasi aan sheegin in uu qabo cudurka uu galayo xabsi.
Susan Timberlake oo ah la taliyaha xaquuqda aadanaha ee hay’ada UNAIDS ayaa sheegtay in hanaankaasi xabsi u dirista qofka aan ku wargelin lamaanaha uu la seexanyo in uu qabo cudurka uu caqabad ku yahay qorshayaasha cusub ee la doonayo in lagula tacaalo fidista cudurka Aids.
Susan ayaa sheegtay in ay muhiim tahay imminka in dad badan oo la il daran cudurka Aids-ka in ay helaan fursado ay kula xiriiraan xarumaha caafimaadka si ay u helaan dawo iyo tallooyinka ku saabsan cudurka laakiin waxay sheegtay in haddii dadka qaba cudurka loogu hanjabo xabsi intaasi ay horseedeyso in qofka qaba cudurka uusan raadsan wax caawiya taasi bedelkeedana cudurka sii fido.
Eedeyntan ayaa timid iyada oo magaaladda Washington ee dalka Mareykanka ka socdo shir looga hadlayo cudurka Aids-ka waxaana qoddobada ugu waaweyn ee shirka ka mid ah sidii dawooyinka hakiya waxyeelada cudurka loo gaarsiin lahaa dad fara badan oo hadda la ila daran cudurka Aids.
Tan iyo bilowgii sanadkii 1980-kii waxaa Iswiidhan la diiwaan geliyay kiisas dad gaaraya 10,000 oo qof qaba cudurka HIV iyada oo maanta dadka cudurka qaba ay gaarayaan 6000 waxuuna machadka la socodka cudurada faafa uu diiwaan geliyay kiisas 219 qof oo cudurka uu ku dhacay sanadkan barkiisa.